Masar oo soo saartay go'aan gebi ahaanba lagu joojinayo Mooto Bajaajta ama Tuk Tukta
Mogadishu - 13:48:28
Friday September 06, 2019 - 22:00:10 in Wararka by Super Admin
Ra’iisul Wasaaraha waddanka Masar Mostafa Madbouly ayaa soo saaray amar gebi ahaanba dalka looga joojinayo isticmaalka Mootada saddexda lugood leh ee Bajaajta ama Tuk Tukta, iyadoo lagu beddelayo gawaari kale oo yar yar oo ka ammaan badan.
Rickshaw waa Mooto yar oo 3 lugood leh oo caan ku ah in ay dhex marto dariiqyada aadka ciriiriga u ah iyo meelaha ay baabuurta kale gali karin, laakiin waxaa lagu eedeynayaa in Tuk Tukta lagu fuliyo dembiyo fara badan, maadaama ay dowladda Masar sheegtay in aysan badankoodu diiwaan gashnayn.
Waxyaabaha kale ee Masar ay ku diiddan tahay Bajaajta ayaa ah iyadoo aan lahayn qawaaniin shaqo oo u degsan, iyo iyadoo dhibaato ku haysa dhaqaalaha Masar maadaama dadka wada aysan bixin canshuurta ku waajibtay, waana middaas tan keentay in Masar ay xal kale raadiso.
Markii ugu horreysay Tuk Tuktu waxaa Masar lagu arkay mar haatan laga joogo 14 sanadood, iyadoo markaa laga keenay dhanka Hindiya, waxaana wixii waqtigaa ka dambeeyay ay abuurtay dood fara badan oo isugu jirta mid bulsho, mid sharci iyo mid amni.
Tiro ahaan Jaraa’idyada Masar ayaa qoraya in Mooto Bajaajta dalka taalla ay gaarayaan 5 milyan oo mooto saddex lugaley ah.
Wasaaradda Maaliyadda iyo hay’adaha kale ee ay quseyso go’aankan soo baxay ayaa Ra’iisul Wasaare Mostafa uu ku amray in ay si deg deg ah amarkan u fuliso, isla markaana ay diyaariyaan qaab looga kaaftoomayo Tuk Tukta gebi ahaan muddo saddex sano gudaheed ah.
Dadka nolol maalmeedkoodu ku xiran yahay Mootadan ee ku shaqeysta sida Ismaaciil Cabdicasiis ayaa aaminsan in mashruucani cusub uusan guuleysan karin, sababtuna aysan ahayn in Mooto tuk tuktu ay tahay qayb ka mid ah nolosha Masaarida, balse ay tahay iyadoo dowladdu aysan haynin wax kale oo ay ku bedesho.
Ra’iisul Wasaare Mostafa ayaa xusay in ay dowladdu hayso qorshe macquul ah oo baabuurta yar raqiiska ah ay ku beddelayaan booska Tuk Tukta, iyadoo halkaasina laga heli doono fursado shaqo oo aad u badan.